Ivan Krylov. Anonyanya kuzivikanwa weRussia fabulist. Chiitiko chekuzvarwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Ivan Krylov. Mufananidzo naKarl Briulov (1839) - Tetryakov Garari. Moscow
Ndakawana Ivan Krylov nemukana makore apfuura, mune zvinyorwa zvangu kuverenga yenhau yaainyora yakamisikidzwa muSoviet Union pakupera kweHondo Yenyika II. Ndakaverenga zvese ipapo: prose, nhetembo uye nyaya, nekuti chero mhando yezvinyorwa nevanyori veRussia zvakandibata, kana ini ndaifunga kuti zvinogona kubatsira kune imwe nguva. Zvakare, ndakwereta zita rekupedzisira raKrylov nekuti ndakarida kune mumwe wevanhu vangu. Akazvarwa muMoscow pazuva rakaita nhasi de 1768 uye inoonekwa se mukurumbira uye ane mukurumbira russian fabulist. Saka ndinouunza kuzere kuno ku chiunza kune avo vasingazvizive nekuverenga ngano dzake mbiri.
2 Ngano mbiri
2.1 Umhutu nemufudzi
2.2 Iyo Swan, catfish uye gakanje
Ivan Andréyevich Krylov aive mwanakomana wemurwi, akashaya aine makore gumi. Naamai vake akatamira kuSt, kukumbira pension yehurumende. Krylov akawana a Ini ndinoshanda kudare, asi ndokuisiya kare kuitira anozvipira kuita basa rake rekunyora. Imwe comedy iyo yaakanyora pazera ramakore gumi nemana ndiyo yaive bhuku rake rekutanga, iro rakahwinawo mubairo waakaisa mumabasa nevanyori veFrance, yaive yefashoni panguva iyoyo. Saka, pakutanga, akazozivikanwa semunyori ane hunyanzvi uye wezvemagariro nemabasa akaita Tsamba yemidzimu, Muoni y Iyo mercury yaSaint Petersburg.
Pakutanga kwe XIX remakore yakatumira a yekutanga kuunganidzwa kwengano makumi maviri nenomwe uye akabudirira kwazvo. Saka akaramba achiburitsa mavhoriyamu (kusvika pa8) yakashanda kuwedzera mukurumbira wake uye kutariswa kusvika parizvino quintessential fabulist yemabhuku eRussia Eheka, zvinyorwa yenyaya dzavo vanonwa kubva mukufemerwa kwema classics senge Aesop kana La Fontaine, asiwo ne Hunhu hweRussia hunhu. Uye ivo vanogovana iyo didactic uye muenzaniso wakanaka yerudzi, kuwedzera pakuratidza hunhu hwevanhu nekusimbisa kunyanya iyo kusakwanisa, kuzvitutumadza nehupenzi munzanga yenguva.
Maitiro ake anoonekwa nekushandisa kwaanoita rusununguko rwemutauro, izvo zvinoreva kuwedzera kwechokwadi uye zvinounza padhuze nevanhu, nekudaro kubudirira kwayo. Semuenzaniso, yakaita kuti mhuka dzifunge uye dzitaure sevaRussia chaivo uye kwete sezvisikwa zvisingaoneki. Izvo, ngatitii, kuva padyo kwakamuisa mumuchinjiko wevatsoropodzi vane tsika, avo vakanongedzera nekuzvidza mashandisiro ake emutauro wakasununguka. Asi pakanga painewo zvakare vanyori vepashure vakadai Alexander Pushkin, mukurumbira mukurusa wekudanana, aizviona se «Nyanduri wechokwadi wechiRussia». Krylov akafa muSaint Peterburg muna 1844.
Mufudzi akarara pamumvuri, achivimba nembwa dzake,
nyoka payakaiona ikabuda mumakwenzi
akakambaira achienda kwaari uye rurimi rwake rwakagadzikana.
Uye mufundisi angadai asisiri wenyika ino
asi mosikito yake ine tsitsi,
uye nesimba rinoruma akarara.
Mutsa mufudzi uuraye nyoka;
asi mosikito isati yasvika pairi pakati pehope
uye murombo haana kusara.
Mangani makesi akadaro aripo:
Nekuti kupfuura vasina simba, vanosundwa nevakanaka,
edza kuratidza vane simba kune vane simba,
iwe uchaona izvo zvakafanana neumhutu
Iyo Swan, catfish uye gakanje
Kana pasina chibvumirano pakati pevamwe
bhizinesi rako harifambe zvakanaka,
uye kutambudzika kusati kwabuda imomo.
Swan, hove uye gakanje
kudhonza mota vakasvika
uye vatatu pamwe chete vakamusunga;
Vanoshanda nesimba, asi mota haiendi!
Mutoro kwavari ungadai usina kuremerwa:
asi ndeyekuti iro dhanzi rinokwevera rakananga kumakore,
crab back, uye catfish yemvura.
Ndiani wavo ane mhosva, ndiani asiri, hazvisi kwatiri kuti titonge.
Mota chete ndiyo ichiripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ivan Krylov. Anonyanya kuzivikanwa weRussia fabulist. Chiitiko chekuzvarwa kwake